ခြေရာကောက်တင်ပို့ခြင်း | OS ကို-STORE ဘလော့ခ်
OS ကို-STORE Tracker ဝန်ဆောင်မှု >>>
OS ကို-STORE packages များကိုခြေရာခံများနှင့်ဖောက်သည်များပေးပို့ updates များကိုအကြောင်းကြားရန်အွန်လိုင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုကူညီပေးပါ. ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေ, ပိုပြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ generate နှင့်ရေကြောင်းပြီးနောက်ဖောက်သည်မေးမြန်းစုံစမ်းလိုသည်များကိုလျော့ချ.
ပံ့ပိုးမှုကျော် 210 couriers query and auto detect.
ပံ့ပိုးမှုကျော် 50 ဘာသာစကားများ, စမတ်ဖုန်းနှင့် tablet အသုံးပြုမှု.
စာမျက်နှာဘာမျှမကျော်လုပ်ပေးခဲ့ 15 မိနစ်, သုံးစွဲဖို့ reflash ကျေးဇူးပြုပြီး.
status & menu ကို >>>
စံဝန်ဆောင်မှု: 1~7ရက် ; 1 ~2ရက် Service ကိုအလျင်စလို
ခြေရာကောက်နံပါတ်မမှန်ကန်ပါ: it maybe non-upload to courier system, ရှေ့ဆက်ရောနှောသည်အခြားနံပါတ်သို့မဟုတ်စနစ်.
ရက်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်အဆက်အသွယ်ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပြီးစစ်ဆေးပါ (သာ OS ကို-STORE အမိန့်).
အခြေအနေကိုစောင့်ရှောက်တဲ့အခါမှာ “အကူးအပြောင်းတွင်” အချိန်ကြာမြင့်စွာနှင့်တယ်ဘယ်တော့မှကို item:
အဆိုပါပစ္စည်းသည်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ဒေသခံအပေါ် Post-ရုံးမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏ထားပြီး, သို့မဟုတ်သင့်မေးလ် box ထဲမှာတစ်ဦးအသိပေးစာလက်မှတ်လည်းမရှိ.
ပိုများသော OS ကို-STORE ဝန်ဆောင်မှု >>>
နည်းပညာ HD Graphics စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု processor ​​ကို device ကိုမော်ဒယ် Technology_Internet စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု Intel က HTC က Software များ Samsung က ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Nokia က စီပီယူ ပရိုဆက်ဆာ 64-နည်းနည်းက Windows ဥပဒေရေးရာအနက် OS ကို-STORE မိုဘိုင်းဖုန်း
Software များ Qualcomm မှ Intel က Server ကို ကားမောင်းသူထောက်ခံမှု စက်ပစ္စည်းကိရိယာမန်နေဂျာ ဥပဒေရေးရာအနက် OS ကို-STORE စမတ်ဖုန်းများ Samsung ရဲ့ Galaxy Samsung က မိုဘိုင်းဖုန်း Nokia က Intel က စီပီယူ ပြည်သူ့ရည်ရွယ်ချက် Technology_Internet နည်းပညာ processor ​​ကို device ကိုမော်ဒယ် HTC က ပရိုဆက်ဆာ စီးရီးယာဉ်မောင်းပံ့ပိုးမှု 64-နည်းနည်းက Windows Sony Ericsson က HD Graphics